Reer Galbeedka:- Faah faahinta Sacuudiga uu ka bixiyay dilka Jamal lama rumeysan karo – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAReer Galbeedka:- Faah faahinta Sacuudiga uu ka bixiyay dilka Jamal lama rumeysan karo
Reer Galbeedka:- Faah faahinta Sacuudiga uu ka bixiyay dilka Jamal lama rumeysan karo
October 22, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Reer Galbeedka:- Faah faahinta Sacuudiga uu ka bixiyay dilka Jamal lama rumeysan karo
War murtiyeed ay si wada jir ah u soo wada saareen seeddexdaasi dal ayaa waxay ku sheegeen arrinta ah inuu Khashoggi uu ku dhintay “dagaal ka dhacay” qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay Istanbul ay u baahan tahay in laga keeno “caddeeymo macquul ah oo la rumeysan karo”.
Madaxweyne Trump wuxuu mar sii horreysay sheegay “inuu ku qanacsaneyn” sida arrinta loo dhigay.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu wacad ku maray inuu mudda gaaban uu ku soo bandhigayo caddeymaha dhabta ee dilka wariyahaasi la xiriira.
Madaxweyne Erdogan wuxuu intaa ku daray inuu faafaahinta ku saabsan dilka Khashoggi uu Talaadada baarlamaanka la hor iman doono.
Dibadbax lagu qabtay Istanbul mar uu ka hadlayna wuxuu sheegay “waxaan raadineynaa ee iisu kaanna keenay waa caddaalad taa ayaana keeneysa inaan runta la qariyey oo dhan aan dibadda soo dhigno.”
Mr Khashoggi wuxuu Qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay Istanbul uu galay 2-da bisha October si uu uga soo dhammeysto warqadda furriinka. Waxayna Sacuudigu inta ay dhimashadiisu qiranin uu marar badan sheegtay inuu Khashoggi isaga oo nabad qaba uu qunsuliyaddooda uu ka baxay, iyaga oo marki dambana sheegay inuu qunsuliyaddooda uu ku dhex dhintay.
War murtiyeedka ay sida wada jirka ah u soo wada saareen seeddexdaasi dal maxay kaga hadleen?
Britain, Faransiiska iyo Jarmalka waxay war murtiyeedkooda ku sheegeen iney ka argagaxeen dilka wariyaha loo geystay iyaga oo sheegay “Inaan dilka wax qiil ah loo sameeyn karin si aad ahna ay u cambaareynayaan”.
Waxayna soo qaateen Sacuudigu sida uu amuurtan uga hadlay, iyaga oo raaciyey “iney u baahan tahay faahfaahin iyo caddeeymo degdeg ah oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen uu Sacuudiga dilka Khashoggi ka bixiyo. Balse Sacuudiga hadalka ka soo yeeray ee ay ku sheegeen iney tahay natiijada baaritanka ee ay sameeyeen aan la qaadan karin oo ay u baahan yihiin in la keeno “caddeeymo macquul ah oo la rumeysan karo”.
Waxayna waddamadu sheegeen “iney xukmineyn ilaa ay sharraxaad dheeraad ah ka helaan dhanka Sacuudiga.”
Iyaga oo sheegay “iney dalbanayaan in la sameeyo baaritaanno kale oo lagu ogaanayo ilaa laga sal gaaro cidda mas’uuliyadda dilka wariyaha loo geystay iska lahayd, ciddii dambiga dilka yeelatana ciqaabta ku habboon la marsiiyo.
Muuqaal muujinaya Khashoggi oo sii galaya Qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul
Waddamada kale maxay ka yirahdeen?
Talaadadi madaxweyne Trump wuxuu sheegay “aniga ahaan kuma qanacsani ilaa su’aalahayga aan jawaab u helo.”
Wuxuuna Mareykanku sheegay iney suuragal tahay inuu Sacuudigu wajaho Cunaqabateyn, heshiisyada hubka uu la galayna uu hakinayo “Inkasta oo heshiiska hub kala iibsiga ay aad noo saameyneyso sida ay iyaga u saameyneyso si ka daran.”
Wasiirka maaliyadda Mareykanka Steven Mnuchin wuxuu Axaddi sheegay, in la fisho cunaqabateyn weliba “xilligiisa ka soo degdega.”
Wasiirka arrimaha dibadda Kanada Chrystia Freeland waxay sheegtay faahfaahinta Sacuudiga ay ka bixisay dilka Khashooggi ay u baahan tahay caddeymo la qaadan karo iney u keenaan.”
Raisal wasaaraha Australia Scott Morrison wuxuu isna sheegay “Hadalka Sacuudiga inuusan ahayn mid miisaaman, oo keligii istaagi karo.”
Hay’adda Amnesty waxay faahfaahinta ku tilmaantay marin habaabin, “dilka naxdinta leh waxa loo sababeeyey.”
Wargeyska Washington Post, oo uu Khashoggi maqaallo badan uu ku soo qori jiray waxay sheegtay inuu Boqortooyada sacuudigu “Hadal laga xishooda uu ka soo yeeray iyada oo weliba beenteedi hore been kale sii dul dhigtay.”
Dhanka Sacuudiga maxaa ka soo kordhay?
Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya Adel al-Jubeir oo Axadda la hadlay telefishiinka Fox News ayaa wuxuu sheegay “iney jiraan shaqsiyaad isku dayay iney dilka Khashooggi ka qariyaan dowladda sacuudiga balse uu isaga ahaan faahfaahin intaasi dheer ogeyn.”
Sawirro:-NISA Oo Soo Bandhigtay Lacag Been Abuur Ah Oo Garoonka Muqdisho Lagu Qabtay
Shabaab oo xukun ku riday nin lagu eedeeyay fal kufsi ah
657,369 total views, 2,454 views today
657,369 total views, 2,454 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
657,241 total views, 2,452 views today
657,241 total views, 2,452 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
657,272 total views, 2,453 views today
657,272 total views, 2,453 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
657,335 total views, 2,455 views today
657,335 total views, 2,455 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
657,393 total views, 2,452 views today
657,393 total views, 2,452 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]